ဗဟုသုတ – Page2– PwintsSan
အိမ်ခြံမြေ ဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် တောင်းယူရမည့် စာရွက်စာတမ်းများ(ဂျင်းမမိစေရန်)
May 19, 2018 twl 0
အိမ်ခြံမြေ ဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်. အိမ်ခြံမြေတိုက်ခန်း အရောင်းအဝယ်လုပ်တဲ့အခါ ဝယ်ယူသူတွေအနေနဲ့ ပိုပြီးခိုင်မာမှုရှိအောင် တောင်းယူရမယ့် စာရွက်စာတမ်းတချို့ကို မဖြစ်မနေ တောင်းယူသင့်ပါတယ်။ အိမ်ခြံမြေအရောင်းအဝယ် လုပ်တဲ့အခါ ရောင်းသူနဲ့ပွဲစားတွေရဲ့ ပြောစကားတွေကိုသာ ဝယ်သူတွေက ယုံကြည်ကြရပါတယ်။ ဒါကြောင့် အိမ်ခြံမြေအရောင်းအဝယ် လုပ်တဲ့အခါ ပိုပြီးစိတ်ချနိုင်အောင် လုပ်သင့်တာတွေ ရှိပါတယ်။ စရန်ပေးရင် ပိုင်ဆိုင်မှု မိတ္တူတောင်းပါ။ […]
ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဝဋ်ကြွေး (19) ချက်အကြောင်း
၁. ဒီဘဝမှာ လက်ဝတ်ရတနာများ နှင့် အဝတ်ကောင်းများဝတ်ဆင်နိုင်ခြင်းဟာ အရင်ဘဝက သင်ဟာ ဘုန်းတော်ကြီးများကို သင်္ကန်းကပ်လှုခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ၂. ဘာလို့ ဒီဘဝမှာ အစားအသောက်ကောင်းများဖြင့် နေရပါသလဲဆိုတော့ အရင်ဘဝက မရှိဆင်းရဲသားတွေကို ပေးကမ်းလှုဒါန်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ ၃. ဘာဖြစ်လို့ ဒီဘဝမှာ ဆင်းရဲပြီး အဝတ်ကောင်းတွေ မဝတ်နိုင်ရသလဲဆိုတော့ […]
ကမ္ဘာပေါ်မှာ အသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့ အကောင်းဆုံးမြို့တွေ
1.Hamburg,Germany ဒီနှစ်မှာနေထိုင်ဖို့အကောင်းဆုံးစာရင်းဝင်လာတဲ့ဒီမြို့ထက်ဂျာမဏီနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဘာလင်ကိုသူ့အလှအပတွေကြောင့်ပိုကြိုက်ကြတဲ့သူတွေများပေမယ့်ဟမ်းဘတ်မြို့ကတော့ပိုနေထိုင်ဖို့ကောင်းလှပါတယ် ဘာလင်ပြီးရင်တော့ ဟမ်းဘတ်မြို့က ဂျာမဏီမှာဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ပါပဲ။ဒီမြို့ မှာ ကမ္ဘာ့ တန်ဖိုးအကြီးဆုံးဆိပ်ကမ်းရှိပြီး မြို့အလယ်မှာလည်းရေလမ်းရှိပါတယ်။ ဒီရေလမ်းမှာ တံတားပေါင်းများစွာရှိပြီး Amsterdam နဲ့ Venice မြို့နှစ်မြို့ပေါင်း တံတားတွေထက်ပိုပါတယ်။ဒီလိုမြို့ကတည် ငြိမ်တယ်ဆိုရပေမယ့် ရာဇဝတ်မှုတွေလည်း ရှိနေပါသေးတယ်။ မရပ်တန့်နိုင်တဲ့ပါတီတွေ လည်းရှိပါတယ်။အကြမ်းဖက်မှုတွေအတွက် လည်းလုံခြုံမှုအပြည့်မပေးနိုင်ဘူးလေ။ဒါ့အ ပြင် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်နဲ့နီးကပ်လွန်း တာကလည်း […]
ဘဝမှာ ဘယ်လိုအိမ်မျိုးနဲ.နေရမလဲ သိချင်ရင် ဖတ်ကြည့်ဗျာ
ကျွန်နုပ် ဧ။် အဘိုးတစ်ဦး သည် ကုန်ထမ်းသော အလုပ်ဖြင့် ပင်ပန်း ဆင်းရဲစွာ အသက်မွေး ရလေဧ။်။ သို့ရာ တွင် ၄င်းဧ။် အိမ်ကလေးမှာမူ သပ်သပ် ရပ်ရပ်နှင့် အတော်ကလေး တန်ဖိုးကြီးလေဧ။်။ အမွေ ရထားသော အိမ်ကလေးဖြစ်ဧ။်။ ထို့ကြောင့်လည်း ထို အိမ်ကလေး ကို […]
သင့် လက်မက ပြောတဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး….
လူတစ်ယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေကနေအဲ့ဒီလူဘယ်လိုလူစားမျိုးလဲဆိုတာ ပြောပြပေးနိုင်တဲ့ အချက်တွေရှိနေပါတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ လက်မကိုကြည့်ပြီး အဲ့ဒီလူ ဘယ်လိုစိတ်နေစိတ်ထား၊ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး ရှိမယ်ဆိုတာ ပြောပြပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းလေး ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦး။ ဖြောင့်တန်းနေတဲ့ လက်မ လက်မထောင်လိုက်တဲ့အခါမှာ ဖြောင့်တန်းနေပြီး နောက်ကိုကွေးညွတ်နေခြင်းမရှိတဲ့ လက်မပိုင်ရှင်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်သင်ဟာအရာရာကိုအရမ်းအလေးအနက်ထားတတ်တဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ဓာတ်မာကြောပြီး ခံစားလွယ်တဲ့သူတစ်ဦးမဟုတ်ပါဘူး။ သင့်ရဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားမှုကို ပြလေ့မရှိတဲ့ သူတစ်ဦးဖြစ်ပေမဲ့ စိတ်ဓာတ်ကျတတ်သူတစ်ဦးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ […]
မြန်မာနိုင်ငံသားခံယူပြီး မြန်မာ့လက်ဝှေ့ကိုချစ်မြတ်နိုးကာ လက်ရှိချန်ပီယံဖြစ်လာသူ ဒေ့ဗ်(ဒေဝ)
လက်ရှိမြန်မာ့ လက်ဝှေ့ရဲ့ ချန်ပီယံနေရာမှာ ရပ်တည်နေတဲ့ ဒေ့ဗ်(ဒေဝ)ကတော့ မြန်မာလူမျိုးတွေ အထင်ကြီးစရာလုပ်ရက်တစ်ခုကို ပြုလုပ်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ မြန်မာ့လက်ဝှေ့ရဲ့ ချန်ပီယံ ရာထူးနှင့်အတူ မြန်မာတို့ရဲ့ လေးစားအားထားရတဲ့ သူတစ်ယောက်အဖြင့် နေထိုင်နေပြီး မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ဦးအဖြစ်လည်း ခံယူထားသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေဝကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီး ဖိုက်တာတွေဖြစ်တဲ့ အောင်လအန်ဆန်း၊ ဖိုးသော်နှင့်အခြားနိုင်ငံကျော်အနုပညာရှင်များစွာရဲ့ အားပေးမှုများစွာကိုလည်း ရရှိထားသူတစ်ယောက်လည်း […]
သင့်ကို လုံးဝ အံ့အားသင့်သွားစေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တစ်ရက် ကွမ်းယာစားသုံးတဲ့ ငွေပမာဏ နဲ့ ကွမ်းယာကြောင့် လူသေနှုန်း ပမာဏ
သင့်ကိုလုံးဝ အံ့အားသင့်သွားစေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တစ်ရက် ကွမ်းယာစားသုံးတဲ့ ငွေပမာဏ မြန်မာနိုင်​ငံတွင်​ ကွမ်းယာစားသုံးမှုအတွက်​ ​​​​တစ်​​နေ့လျှင်​ ကုန်​ကျ​ငွေကျပ်​ ၁၂ဘီလီယံခန့် ရှိ​ကြောင်း လူထုကျန်းမာ​ရေး​ဖောင်​​ဒေးရှင်းဥက္ကဌ ဦးသန်းစိန်​က ​ပြောသည်​။ ထိုသို့ ကွမ်းစားသုံးမှု​ကြောင့်​ မြန်​မာနို​င်​ငံတွင်​ နှစ်​စဉ်​ လူ ၆ သောင်းခန့်​​သေဆုံး​နေသည်​ဟုဆိုသည်​။ “များ​သောအားဖြင့်​ လူ​တွေက ​ပြောတာက […]
ခွဲစိပ်မှ သည်းခြေကျောက် ၉၀၁ လုံး တွေ့ရှိခဲ့ရလို့ ဆရာဝန်ကိုယ်တိုင် အံ့သြခဲ့ရပြီး အသက်ရှင်လွတ်မြောက်ခဲ့သူ ဒေါ်ခင်မာကြူ
တောင်တွင်းကြီးမြို့၊ ချောင်းနက်အရှေ့စုရွာတွင် နေထိုင်သည့် အသက် ၅၀နှစ်အရွယ် ဒေါ်ခင်မာကြူ၏ သည်းခြေအိတ်မှ သည်းခြေကျောက် ၉၀၁ လုံးတွေ့ခဲ့ရသဖြင့် ခွဲစိတ်ကုသမှုပေးခဲ့သည့် ဆရာဝန်ကိုယ်တိုင်ပင် အံ့အားသင့်ခဲ့ရကြောင်း Healthy Life ဂျာနယ်ရေးသားဖေါ်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။အနာ နှင့် ဆေး တလွဲစီဖြစ်နေပြီး ခံစားနေခဲ့ရတဲ့ ဒေါ်ခင်ကြူမာရဲ့ ဝေဒနာသည်ဘ၀မှ အသက်ရှင်လွတ်မြောက်ခဲ့သူ အတွက် အတိုင်းမသိ […]
နာမည်ကြီး ဟော့ဖြစ်နေတဲ့_ဆန်ဆေးရေကိစ္စ လက်တွေ့အသုံးချကြည့်တဲ့အခါ
ဟော့ဖြစ်နေတဲ့_ဆန်ဆေးရေကိစ္စ *ဆန်ဆေးရေကိစ္စ အခုတလောခေတ်စားနေတယ်။ ဂျာနယ်တခုမှာ ပါတဲ့ သတင်းတပုဒ်ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ တရက်ကပဲ တနင်္ဂနွေကျန်းမာရေးအမေးအဖြေ အစီအစဉ်တခုမှာ ဆန်ဆေးရေနဲ့ပက်သတ်ပြီး မေးထားတာရ်ှလို့ ရေးဖို့ဖြစ်လာတယ်။ ဆန်ဆေးရေဆိုတာ ရှေးယခင်နှစ်ပေါင်းများစွာထဲက အဘိုးအဘွားတွေ သုံးစွဲခဲ့တာ ကြားဖူးကြမယ်။ အာယုဗေဒဆေးကျမ်း၊တရုတ်ဆေးကျမ်းတွေမှာလည်း ဆန်ဆေးရေရဲ့ အာနိသင်တွေရေးထားတာရှိပါတယ်။ အသားအရေလှတာ၊ ဝက်ခြံပျောက်ကင်းတာ၊ ဆံသားကို နက်မှောင်သန်စွမ်းစေတာ […]
တီထွင်ဆန်းသစ်သူဟာ ဆုတွေ တစ်သီကြီးရခဲ့တဲ့ လျှပ်စစ်မလို၊ မီတာမကုန်၊ အရမ်းလွယ်တဲ့ မြေအိုးရေခဲသေတ္တာလုပ်နည်း
လျှပ်စစ်မီးတွေ မရှိပဲ ရေခဲသေတ္တာအဖြစ် အသုံးပြုတဲ့ နည်းပညာကို နိုက်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံသား အင်ဂျင်နီယာ တစ်ဦးဖြစ်သူ မစ္စတာ မိုဟာမက် ဘာအက်ဘာက တီထွင်ဆန်းသစ်ခဲ့ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လို The pot-in-pot refrigerator သို့မဟုတ် အာရေဗစ်ဘာသာစကား အသံထွက်နဲ့ပြောရရင် zeer လို့ ခေါ်တဲ့ မြေအိုး ၂ ခုကို […]